Windows madhiraivha akaiswa paLinux | Linux Vakapindwa muropa
NDISwrapper: Isa Windows Dhirairi pane Linux
Isaac | | Linux software, Windows
Kune vatyairi vakawanda uye vatyairi vezvinhu zvekuparadzirwa kweGNU / Linux, asi panogona kunge paine zvimwe zvinhu zvinoshaya madhiraivhi uye zvisingashande pakombuta yedu. Kune chishandiso chisiri chazvino, asi chakatora nguva yakareba asi pamwe hachizivikanwe zvakanyanya, icho chinonzi ndiswrapper uye inoshandiswa kuisa vatyairi veWindows muLinux.
Kunyangwe ichiita sechisinganzwisisike kwauri kana iwe usina kumuziva, zvinokwanisika kuti uite izvi. Chaizvoizvo ndiswrapper inoshandura madhiraivha akavakirwa kuiswa muWindows kuita mutyairi akagadzirira kushanda muLinux, kunyange izvi zvisingakurudzirwe uye inogona kupa matambudziko, kune zvimwe zviitiko zvakanyanyisa inogona kuve inoshanda uye kudzivirira inopfuura rimwe dambudziko nekuenderana kwezvinhu zvedu.
Kunyanya, izvo ndiswrapper zvinobvumidza kushandisa network kadhi madhiraivha izvo zvakagadzirirwa maWindows uye pasi peAPI yayo, kuvaputira nenzira yekuti igone kushanda neLinux kernel. Unogona kuiisa pane yako distro kubva kunzvimbo dzekuchengetedza, kurodha pasi kubva pawebhu kana nematurusi senge kukodzera, kubva kunowanikwa, nezvimwe. Kana tangoiswa isu tinokwanisa kutora network kadhi madhiraivha eMicrosoft Windows uye totsvaga iyo .inf faira inosanganisirwa mune izvi.
Zvino ne iyo .inf faira Mune yedu distro, isu tinoita inotevera kuraira, iyo inogadzira nekumisikidza faira /etc/modprobe.d/ndiswrapper ine ma alias anoenderana nevatyairi. Izvi zvinogona kukonzera matambudziko kana isu tatova neimwe kadhi rine zita rimwe chete, saka rinofanira kuchinjwa. Paunenge waita zvinotevera zvinofanirwa kushanda:
Tinogona kuona vatyairi vakaisirwa ne:
Kana kudzima iyo controller kana isingashande kana isiriyo:
Sezvo paine ndiswrapper ye network kadhi madhiraivha, kune mamwe maturusi emamwe marudzi ehurongwa anoita basa rimwe chete, achishandisa akavhara Windows madhiraivha kuiswa muLinux distro yedu. Mumwe muenzaniso ungave Shanje, mune ino kesi yeNVIDIA uye ATI / AMD GPUs, kunyange hazvo ikozvino kuri kupusa tichifunga kuti kune ese emahara uye epachivande madhiraivha eLinux yemakadhi aya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » NDISwrapper: Isa Windows Dhirairi pane Linux
uye hapana chakajairika? Ndokureva, kuti inoshanda kune chero mhando yemutyairi zvisinei nekuti ndeye gpu, ethernet, wifi kana chero chii?
Pindura kuna tigreci
Francisco Nadador anotiudza nezve zvaakaona munyika yeongororo yekuongorora
Isa kutaridzika kweWindows 10 kune yako Linux nemusoro wenyaya